Astrology Archives - Shwe Pann Thee
အင်္ဂါ သားသမီးများအတွက် ဘဝတစ်သက်စာဟောစာတမ်း နှင့် ယတြာများအင်္ဂါ သားသမီးများအတွက် ဘဝတစ်သက်စာဟောစာတမ်း နှင့် ယတြာများ
အင်္ဂါ သားသမီးများအတွက် ဘဝတစ်သက်စာဟောစာတမ်း နှင့် ယတြာများ ဘဝတစ်ဆင့်ချိုးပြောင်းလဲမြင့်တက်သွားအံ့ စီးပွားတက်အံ့ နာမည်ဂုဏ်သတင်းကျောဇောထင်ရှားအံ့ အကောင်းပြော ချီးမွမ်းခံရလတ္တံ့ တရားထူးအသိထူးရအံ့ ရာထူးတိုးလစာတိုးခြင်း၊အလုပ်နေရာကောင်းရရှိခြင်းများကြုံလတ္တံ့ ကံတရာ သက်ရှိသက်မဲ့ အားလုံးတို့၏ မျက်နှာသာပေးခြင်း ခံရလတ္တံ့စိတ်ထဲမှာ ဖြတ်ခနဲပေါ်လာလျှင် ဆတ်ခနဲ ထလုပ်ပါ ...
တနလ်ာ သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၂ခုနှစ် မေလ (၁)လစာဟောစာတမ်း…တနလ်ာ သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၂ခုနှစ် မေလ (၁)လစာဟောစာတမ်း…
တနလ်ာ သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၂ခုနှစ် မေလ (၁)လစာဟောစာတမ်း ယခုကာလအတွင်း ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇော ဥစ္စာပေါမည့် အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်က မိမိမျှော်လင့်ထားသောဆန္ဒများ အဆင်ပြေအောင်မြင်မှုများရရှိ၍ စိတ်ချမ်းသာမှုများရရှိခံစားရမည်။ ခရီးသွားလိုသူများအတွက် လမ်းခရီးတွင်မျက်နှာပွင့်လန်းကာအောင်မြင်သောခရီးဖြစ်၍ အဆင်ပြေမှုများရရှိ ခံစားရမည်။ ယာယီခရီးသွားသူများအတွက် ခရီးမှအပြန်တွင်လက်ရှိအခြေအနေထက်ပိုမို၍ပင်အဆင်ပြေလာစေတတ်ပါသည်။ မပြီးပြတ်သေးသော ...
အပေါင်းအသင်းမက်ပေမယ့်လည်း ချစ်သူကို အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ တနင်္ဂနွေသား/ သမီးများအကြောင်းအပေါင်းအသင်းမက်ပေမယ့်လည်း ချစ်သူကို အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ တနင်္ဂနွေသား/ သမီးများအကြောင်း
ချစ်သူအပေါ် အနိုင်ယူ လိုတဲ့ စိတ် ရှိတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ့်ရဲ့ အလိုကျ အတိုင်း ဖြစ်စေချင်တဲ့သူမျိုး။ အရမ်းလည်း ချစ်တတ် ကြတယ် ။ တနင်္ဂနွေ သားသမီးတွေက အရမ်းကြီး မထူးဆန်းပေမယ့် အခြားလူတွေနဲ့ ကွဲပြားတဲ့ ...
သောကြာ သားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၄ ခုနှစ် အတွင်း တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်းသောကြာ သားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၄ ခုနှစ် အတွင်း တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း
သောကြာ သားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၄ ခုနှစ် အတွင်း တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း စီးပွားရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် ခရီးမကြာခဏသွားရမည်။ ခက်ခဲသောခရီးများလည်း ကြုံရမည်။ လျှို့ဝှက်ချက်များအား ထိန်းသိမ်းဖို့ ခက်ခဲနေလိမ့်မည်။ ကတိစကားတည်ဖို့ ခက်မည်။ စိတ်ရှည်သည်းခံမှ လုပ်ငန်းဆောင်မည်မှု ရရှိနိုင်ပါသည်။ စီးပွားရေးအတွက် ...
ကျက်သရေမင်္ဂလာတိုး၍ ဝင်ငွေတိုးစေသော ယတြာကျက်သရေမင်္ဂလာတိုး၍ ဝင်ငွေတိုးစေသော ယတြာ
ကျက်သရေမင်္ဂလာတိုး၍ ဝင်ငွေတိုးစေသော ယတြာ လင်ဗန်း တစ်ချပ် (အဝိုင်း ဖြစ်ရမည်။ မည်သည့် လင်ဗန်း မဆို ရပါ သည်။ စတီ လင်ဗန်း ကြေးလင်ဗန်းကို ပိုသုံးစေ ချင်ပါ သည်။) သရက်အရွက် ၉ ...
ကလေးဝဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကြက်သီးထလောက်အောင်မှန်နေတဲ့ အနာဂါတ်မြန်မာပြည်ဟောစာတမ်းများ…ကလေးဝဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကြက်သီးထလောက်အောင်မှန်နေတဲ့ အနာဂါတ်မြန်မာပြည်ဟောစာတမ်းများ…
ကလေးဝဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကြက်သီးထလောက်အောင်မှန်နေတဲ့ အနာဂါတ်မြန်မာပြည်ဟောစာတမ်းများ ကလေးဝဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကြက်သီးထလောက်အောင်မှန်နေတဲ့ အနာဂါတ်မြန်မာပြည်ဟောစာတမ်းများ။ တိုင်းပြည်အနာဂါတ်အတွက် ဘောင်းဘီဝတ်တွေလာလိမ့်မည်၊ ဘုရားအဆူဆူမှာ စစ်ဖိနပ်သံတွေကြားရလိမ့်မည်။ ရေစက်ခွက်ကိုင်လည်းဘောင်းဘီဝတ်တွေပဲ၊ ၂၀၀၀နှစ်ထောင်ခုနှစ်မှစ၍ မြတ်ဘုရား၏သာသနာကို သကြားကူလို့စောင့်ရှောက်မည်၊ နဂါးတွေကိုသာသနာကူဖို့ သကြားကတာဝန်ပေးလိုက်ပြီ၊ ကပ်ဆေးလိမ့်မည်။ အမည်အသစ်နဲ့အနာရောဂါတွေပေါ်လာမည်၊ ကူစက်မြန်သည့်ကာလဝမ်းအနာမျိုးလိုပဲ ပိုးမွှားအနာပေါ့လေ။ ...
ဗုဒ္ဓဟူးနှင့်ရာဟု သားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၄ ခုနှစ် အတွင်း တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်းဗုဒ္ဓဟူးနှင့်ရာဟု သားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၄ ခုနှစ် အတွင်း တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း
ဗုဒ္ဓဟူးနှင့်ရာဟု သားသမီးများ အတွက် ၁၃၈၄ ခုနှစ် အတွင်း တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း စီးပွားရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေရှည်အကျိုးရှိသောလုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမိမည်။ အလုပ်ကိုင်မှန်သမျှအောင်မြင်နိုင်သောကြောင့် ဇွဲရှိရှိဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ပါ အောင်မြင်ပါမည်။ငွေရှာရလွယ်သလို၊ ငွေထွက်ကလည်း ကြမ်းပါလိမ့်မည်။ လှူခြင်းအားဖြင့် ငွေဝင်မပြတ်ပဲ ငွေအဖတ်တင်လိမ့်မည်။ ...
သောကြာသားသမီးတွေ ဒီစာလေးကိုဆုံးအောင်ဖတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂုဏ်ယူလိုက်ကြရအောင်သောကြာသားသမီးတွေ ဒီစာလေးကိုဆုံးအောင်ဖတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂုဏ်ယူလိုက်ကြရအောင်
သောကြာသားသမီးတွေ ဒီစာလေးကိုဆုံးအောင်ဖတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂုဏ်ယူလိုက်ကြရအောင် “သောကြာ သားသမီးတွေရဲ့ သူမတူတဲ့ မွေးရာပါ အားသာချက်တွေနဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်” ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုရဲ့ ငါးရက်မြောက်နေ့မှာ မွေးဖွားတဲ့ သောကြာသားသမီးလေးတွေဟာ ဗီးနပ်စ်ဂြိုလ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သောကြာသားသမီးလေးတွေမှာ သူများနဲ့မတူတဲ့ အားသာချက်နဲ့ ...
လောကီပညာအရ လာဘ်မပိတ်အောင် လက်သည်းညှပ် သင့်တဲ့ ရက်စွဲများ အကြောင်းလောကီပညာအရ လာဘ်မပိတ်အောင် လက်သည်းညှပ် သင့်တဲ့ ရက်စွဲများ အကြောင်း
ဘယ်နေ့မှာ လက်သည်း ခြေသည်းညှပ်သင့်လဲ? ဘယ်နေ့မှာ လက်သည်း ခြေသည်းညှပ်ရင် ဘာအကျိုးရသလဲ… ( လောကီပညာထဲက သိစရာ ) လက်သည်း ခြေသည်း ညှပ်ကြတယ်…. တချို့က ကျန်းမာရေးအရ ညှပ်တယ် တချို့က လက်သည်းရှည်ရင် မနေတတ်လို့ ...